GODOB GAYAAN: Oday gabadhiisii & wiilkii guursadey DAB u qabadsiiyay isma ”gayno” darteed! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka GODOB GAYAAN: Oday gabadhiisii & wiilkii guursadey DAB u qabadsiiyay isma ”gayno”...
GODOB GAYAAN: Oday gabadhiisii & wiilkii guursadey DAB u qabadsiiyay isma ”gayno” darteed!
(Mumbai) 07 Maajo 2019 – Lamaane da’yar ayaa dab lagu qabadsiiyey bannaanka magaalada Mumbai, taasoo ay kaaga darane ku keceen isla qoyska midkood oo kasoo horjeedey guurka labadan qof oo aan ”gayaan” ahayn sida ay qabaan.
Gabadha oo uur lahayd ayaa isla goobta ku dhimatay, halka wiilka uu soo gaarey dab noloshiisa halis gelinaya.
Mangesh Ransingh oo 23-jir ah iyo xaaskiisa Rukmini oo 19-jir ahayd ayaa sida la sheegay waxaa gubey 3 qofood oo qoyska gabadha ah, kuwaasoo uu ka mid ahaa aabbaha gabadha oo uur 2 bilood ah lahayd xilligii gubitaanka, sida ay sheegeen booliisku.
Sheekadu waxay ka bilaabatay markii uu Ransingh oo kasoo jeeda Caste aan ahayn midda gabadhu uu tegey guriga gabadha oo ku yaalla tuulo ku taalla bannaanka Mumbai 1-dii bishan Maajo.
Deeto qoyska ayaa la sheegay inay uga dhaarteed inay gabadhu ninkeeda raacdo, kaddib waxaa gacanta isula tegey Ransingh iyo laba nin oo Rukmini adeerro u ah, kaddib labadooda iyo aabihii gabadha ayaa la sheegay inay garaaceen lamaanaha kahor intii aanay gaas kerosine ah ku belbelin oo aysan dab qabadsiinin iyagoo nool.
“Way xirxireen labadooda kaddibna waxay dab ku qabadsiiyeen guriga dhexdiisa, waxaana albaabka furay dad qaaca kasoo arkay bannaanka,” ayuu yiri Ransingh walaalkii oo warbaahinta u warramay.
Labadooda ayaa nolol lagu gaarey, waxaana loola cararay cisbitaal u dhowaa, balse gabadhu markiiba waa xijaabatey, halka Ransingh uu weli ku jiro xaalad nolol iyo geeri u dhaxaysa.
Previous articleUK & Canada oo bilaabaya baraamij lagu abaal marinayo weriyeyaasha ka howlgala Somalia (Eeg shuruudaha ka qayb galka)
Next articleDAAWO: Taageerayaasha Liverpool oo sameeyay xeelad ay ku wiiqayaan bandhigga Messi & Barca